Atrikasa nasionaly – EPQ: omena ny governemanta vaovao ny tohin’ny tetikasa | NewsMada
Atrikasa nasionaly – EPQ: omena ny governemanta vaovao ny tohin’ny tetikasa
Nifarana omaly, alakamisy 17 janoary ny fikaonan-dohan’ny fanatanterahana ny atrikasa nasionaly ny EPQ (Education Physique de Qualité). Nivoitra nandritra izay 3 andro izay fa ilaina ny mametraka paikady ho amin’ity tetikasa ity ary tokony hotohizan’ny minisitra vaovao izany.
Namafisin’ny Minisitry ny tanora sy ny fanatanjahantena, ny Minisitry ny fanabeazam-pirenena, ny mpiara-miombona antoka ary ireo mpisehatra rehetra, tetsy amin’ny “Asia Africa Hotel”, fa ilaina ny fametrahana amin’ny toerana ambony ny fanabeazana ara-panatanjahantena eto Madagasikara. Tontosa ny fikaonan-doha fa ny fanatanterahana azy no sisa andrasana, raha ny fanazavana nentin’ny Minisitry ny tanora sy ny fanatanjahantena, i Faratiana Tsihoara Eugène. Antenaina ny hanohizan’ny mpitantana vaovao ny fampiharana ity tetikasa ity. Tetsy ankilany, mangetaheta ny hanatanterahana amin’ny antsakany sy andavany izay rehetra tapaka nandritra ity atrikasa ity ireo mpizaika miisa 200 mahery, raha ny nambaran’ny solontenan’izy ireo nandritra ny fandraisam-pitenenana, omaly, tamin’ny lanonana famaranana.
Raha tsiahivina, hevi-dehibe nisongadina nandritra ny fanomezan-danja ny fanatanjahantena eo amin’ny firenena iray izay miainga avy any ifotony. Ny fanabeazana ara-panatanjahantena no fototra ho an’ny fahasalamana ho an’ny olom-pirenena iray ka hahatonga azy ho mavitrika sy manana ny maha izy azy ary hiteraka fampandrosoana maharitra ho an’ny firenena.
Natao indrindra ity tetikasa ity ho fanomanana ihany koa ilay “Conférence ministérielle africaine” hatao eto Madagasikara, ny volana jiona izao, ka amin’izany indrindra dia ho fitaratra ny firenena malagasy, amin’ny fampiharana ny EPQ, hoy hatrany ny fanazavan’ny minisitry ny tanora sy ny fanatanjahantena. Ity farany izay nisaotra ny mpisehatra rehetra nandray anjara tamin’ny tetikasa, no sady mamarana ny fotoam-piasana ihany koa.